Yan Aung: Overview of the Schools and TOEFL
ဒီတော့ iBT, CBT, PBT ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စမ်းပါစေ။ သူတို့ကို Beat လုပ်ဖို့နည်းလမ်းကတော့ သိပ်မကွာပါဘူး။ TOEFL အတွက် Practice လိုပါတယ်။ များများလေ့ကျင့်ရင် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ဘာပြောမှန်းမသိလိုက်တာတောင်မှ အဖြေမှန်ကို ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီအဖြေမှန်တာလည်းလို့ TOEFL ကပြန်မမေးပါဘူး။ ဒါကိုကအားသာချက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီတော့ သူ့ရဲ့ Trick လေးတွေကို ရှောင်တတ်တိမ်းတတ်၊ အသုံးချတတ်ဖို့ များများလေ့ကျင့်ပါ။ ကျွန်တော် TOEFL ဖြေခဲ့တုန်းက ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်တွေ့လေးတွေကို ညှပ်ညှပ်ပြီးပြောသွားပါမယ်။
ကျောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်လျှောက်တဲ့ကျောင်းရဲ့ Criteria ကို အရင်စုံစမ်းပါ။ ဘာ Test တွေလိုမလဲ။ ဘယ်လို Recommendation တွေတောင်းလဲ။ International Student တွေရဲ့ အချိုး ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဆိုတာတွေ အပါအ၀င် အဲဒီ့ကျောင်းရဲ့ Rank ကိုလည်းသိနေပါစေ။ America မှာ ကျောင်းတွေ ၄၀၀၀ နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးမကောင်းပါဘူး။ တစ်ချိုကျောင်းတွေဆို ပိုက်ဆံကိုပဲ ဦးတည်ထားတယ်။ ဘာမေးမေး ပိုက်ဆံပဲ။ အဲဒီ့တော့လည်း Forget it! ပေါ့။ ကျောင်းပေါပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အချိန်ယူပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်။
ကျောင်းအကြောင်းနဲ့ TOEFL အကြောင်း ယှဉ်ပြောသွားပါမယ်။ ကျောင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲက ကိုယ်သဘောကျတဲ့ကျောင်းကို ရွေးပြီးရင် Email Contact မှန်မှန်လုပ်ပါ။ အားမနာတမ်းမေးပါ။ အိမ်မှာ ကျောင်းတွေကို list လုပ်ထားပြီး Data လေးတွေချရေးထားပါ။
2. Contact Address, Email, Person, etc...
3. Minimum TOEFL Requirement
4. SAT Required?, If which one? SAT-I or SAT-II or both?
5. Application Deadline, Rolling Admission?, EA?, ED?
6. Annual Tuition Fees
ဒါက ဥပမာပါ။ ကိုယ်ကြိုက်သလိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ EA, ED အကြောင်းထပ်ရှင်းပြပါမယ်။ EA ဆိုတာ Early Admission ပါ။ ဒီကျောင်းကို အရမ်းကြိုက်လို့ တစ်ခြားကျောင်းတွေထက် ဦးစားပေးပြီးတင်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ Deadline က Regular Deadline ထက်တစ်လလောက် ပိုစောတတ်ပါတယ်. Scholarship Fund တွေဘာတွေရှိရင် ကိုယ့်ကို ဦးစားပေးစဉ်းစားပေးပါတယ်။ Contract မရှိပါဘူး။ ဒီကျောင်းကိုရလည်း တစ်ခြားကျောင်းတွေက Admission ရရင် သွားတက်လို့ရပါတယ်။ No Bond ပါ.
ED ကတော့ Early Decision ပါ. EA နဲ့ တူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Sign ထိုးရတယ်။ Admission ရရင် ဒီကျောင်းကိုပဲတက်ပါမယ်ပေါ့။ ဒါက EA နဲ့ ED ပါ။ ကောင်းတာလည်းရှိသလို ဆိုးတာလည်းရှိပါတယ်။ ကောင်းတာက ဦးစားပေးစဉ်းစားတယ်။ Scholarship ရှိရင်လည်း ကိုယ့်အတွက် ဦးစားပေးတယ်။ မကောင်းတာက ဒီကျောင်းရပြီးမှာ ဒီ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ကျောင်းတွေရရင် သွားလို့မရတာပါပဲ။ (မရှင်းရင်ဆက်မေးပါ.)
Rolling Admission ကတော့ Deadline မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီးတော့လည်း နောက်ကျပြီးမှ သွားမလျှောက်နဲ့ပေါ့။ တစ်ခုခုလိုရင် လိုက်ဖို့ အချိန်မမှီတာတွေဖြစ်တတ်လို့ အားလုံးကိုစောစောပြီးအောင်သာလုပ်ထား၊ လျှောက်ထားစေချင်ပါတယ်.
အကြမ်းဖျင်း Deadline တွေကတော့ August (Fall Semester) မှာ လာတက်ချင်သူတွေအတွက် December 15, Jan 2, or Jan 15 လောက်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ Postmarked Date ပါ။ January (Spring Semester) မှာလာတက်ချင်သူတွေအတွက် June~August ထဲမှာ Deadline တွေရှိပါတယ်။
အကြမ်းဖျင်း TOEFL Requirement ကတော့ PBT (500~550) ပါ. CBT Equivalent ကတော့ (173~213) ပါ။ Scholarship လျှောက်ချင်သူများကတော့ TOEFL ကို 580 လောက် Minimum လိုပါတယ်။ 600 ကျော်ရင် စိတ်ချရပါတယ်။
Score Companion Chart ကို ဒီမှာ Download လုပ်ပါ။
TOEFL Scores Companion Chart.pdf
ဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ရေးသွားပါမယ်။ တစ်ခြားသူတွေရဲ့ Suggestion တွေကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။